ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ဘားအံ နှင့် ဇွဲကပင်မြေ Technological University Hpa-an: Cooling Coil of Air Handling Unit ( AHU ) အကြောင်း
Cooling Coil of Air Handling Unit ( AHU ) အကြောင်း
Cooling Coil of Air Handling Unit
လေထဲမှ Sensible and latent heat ကို AHU ၏ cooling coil မှ တဆင့်ဖယ်ထုပ်(remove)သည်။ The cooling medium သည် chilled water သို့ refrigerant ဖြစ်သည်။ vapor compression refrigeration cycle တွင် refrigerant coil သည် evaporator ဖြစ်သည်။ cooling coil ၏ The psychrometrics of cooling and dehumidification process ဖြစ်ပုံကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုအပ်သည်။
fin ငယ်ကလေးများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော all finned coils တွင် အချို့ သော လေများသည် Cooling Coil ၏ fins သို့ tubes များကို မထိပဲ ဖြတ်သွားသည်။ ထိုသို့ fins သို့ tubes များကို မထိပဲ ဖြတ်သွားသည့်လေကို bypass Air ဟုခေါ်သည်။ four-row coil တွင် လေသည် 3.5 m/s ဖြတ်သွားလျှင် ဝင်လာသည့်လေ၏ 30% သည် fins သို့ tubes များကို မထိပဲ ဖြတ်သွားသည်။ 30% bypass ဖြစ်သည်ဟုပြောဆိုကြသည်။ eight-row coil တွင် လေသည်1.5 m/s ဖြတ်သွားလျှင် ၂% bypass ဖြစ်သည်။
Cooling Coil သည် Air Handling Unit ၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Coil များ ၏ အဓိက လုပ်ဆောင်မူ (Function) မှာ Heat Transfer လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ Coil များ ကို Heat Exchanger ဟုလည်းခေါ်သည်။ Air Handling Unit ၏ Cooling Coil သည် နားလည်ရန် လွယ်ကူပါသည်။ Air Handling Unit ၏ Cooling Coil နားလည်လျှင် ကျန်အမျိုးအစာအားလုံးကို နားလည်နိုင်သည်။
Chilled-water cooling coils သည် plate-fin-tube heat exchangers များဖြစ်ကြသည်။ အကြီးစားအဆောက်အဦးများတွင် cooling and dehumidification လုပ်ရန်အတွက် အများဆုံးအသုံးပြုကြသည်။ အောက်တွင်ပြထားသောပုံသည် typical chilled-water cooling coil ၏ ပုံဖြစ်သည်။ လေသည် coil ၏ ဘယ်ဘက်မှ ဝင်၍ closely-spaced wavy finned
Surfaces များကို ဖြတ်သွားသည်။ Chilled water သည် ထိုဝင်လေ၏ဆန်ကျင်ဘက်မှ coil ထဲသို့ ဝင်ပြီး ဖြတ်စီးသွားပြီး ဝင်လာသည့် warm air ကို အေးစေပြီး ရေငွေ့ မှုန်များကို ဖယ်ထုပ်ခြင်း(Dehumidification) ဖြစ်စေသည်။ cross-counterflow arrangement ဟုခေါ်သည်။
Air Handling Unit တွင် Cooling Coil နှင့် Heating Coil ဟု၍နှစ်အမျိုးရှိသည်။
Type of Coil of Air Handling Unit
Cooling Coil Heating Coil
Chilled Water Cooling Coil Hot water Coil
Direct Expansion Cooling Coil (DX coil) Hot water Coil
Cooling Coil တွင်လည်း Chilled Water Cooling Coil နှင့် Direct Expansion Cooling Coil (DX coil) ဟု၍နှစ်အမျိုးရှိသည်။ Chilled Water Cooling Coil သည် အေးသည့် fluid (Chilled Water) နှင့် ပူသည့် fluid (Return Air) တို့ အတွင်း Heat Exchange ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ တနည်း ပူသည့် fluid (Return Air)မှ Heat (အပူ)သည် Coil မှ တဆင့် အေးသည့် fluid (Chilled Water) သို့ စီးဆင်းသွားသည်။ Heat သည် Temperature မြင့်သည့်နေရာမှ Temperature နိမ့်သည့်နေရာသို့ စီးဆင်းလေ့ရှိသည်။ Coiling Coil သည် Air Handling Unit တွင် မရှိမဖြစ်ပါရမည့် (essential) အစိတ်အပိုင်း (Part) ဖြစ်သည်။ Heating Coil သည် Air Handling Unit ၏ optional item ဖြစ်သည်။ Cold country များအတွက်သာလိုအပ်သည်။
Heating Coil တွင်လည်း Hot water Coil နှင့်Hot water Coil ဟု၍ နှစ်မျိုးရှိသည်။ Hot water Coil သည် အေးသည့် fluid (Return Air) နှင့် ပူသည့် fluid (Hot Water) တို့ အတွင်း Heat Exchange ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ တနည်း ပူသည့် fluid (Hot Water) မှ Heat (အပူ)သည် Coil မှ တဆင့် အေးသည့် fluid (Return Air) သို့ စီးဆင်းသွားသည်။
AHU Cooling Coil တည်ဆောက်ပုံ
AHU Cooling Coil ကို ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း Tube နှင့် Fins များဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည်။ Tube နှင့် Fins တို့ကို အပူလျှောက်ကူးမှုကောင်းသော သတ္တုတို့ဖြင့်ပြုလုပ်ရမည်။
Coil ၏ Tube ကို ကြေးနီ သတ္တု (Copper Material ) ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ Fin ကို အလျုမီနီယံ သတ္တု (Aluminum Material) ဖြင့်ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ ကြေးနီ သတ္တု (Copper Material ) ၏ ဓါတုဗေဒ သင်္ကေတမှာ Cu ဖြစ်သည်။ အလျုမီနီယံ သတ္တု (Aluminum Material) ၏ ဓါတုဗေဒ သင်္ကေတမှာ Al ဖြစ်သည်။
Cooling Coil ၏ pipe header ကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် Chilled Water Cooling Coil နှင့် Direct Expansion Cooling Coil (DX coil) ဖြစ်ကြောင်းခွဲခြားနိုင်သည်။ Chilled Water Cooling Coil ၏ Header သည် ပိုက်အကြီးတစ်ချောင်းသာဖြစ်သည်။ Direct Expansion Cooling Coil (DX coil) တွင် Refrigerant သည် Expension ဖြစ်ရန်လိုအပ်သောကြောင့် Small tube ကလေးပေါင်းများစွာဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်
ROWS / FPI/ CIRCUIT
Coil ၏ ဘေးဘက်မှကြည့်လျှင်မြင်ရသည့် Copper Pipe တန်းများ၏ အရေအတွက်ကို Rows ဟုသတ်မှတ်သည်။ FPI = Fins per Inch တစ်လက်မအတွင်းရှိသည့် Fin ကလေးများ၏အရေအတွက်ဖြစ်သည်။ Circuit အမျိုးအစားကို ဖော်ပြထားသည်။ AHU model တူသော်လည်း Coil ၏ Rows နှင့် Fins များလျှင် Cooling Capacity များသည်။ သို့သော် Coil ၏ Rows နှင့် Fins များလျှင် လေကို ခုခံမှုအား (Air Resistance) များသောကြောင့် Blower မော်တာ အားကောင်းရန်လိုသည်။
ROWS နှင့် FPI (Fins per Inch) တို့ကိုမည်ကဲ့သို့သတ်မှတ်သည်ကို အောက်ပါပုံများတွင်လေ့လာနိုင်ပါသည်။ Fins များနှင့် ချိပ်ဆက်ထားသော Tube Bank တစ်ခုလုံးကို Coil ဟုခေါ်ဆိုသည်။
ထို Tube Bank ကို circuit ငယ်ကလေးများနှင့် ခွဲထားသည်။
finned width များလေလေ၊ the number of tube feeds များလေလေဖြစ်ပြီး the number of flow passages လည်းများသည်။
The greater the finned width, the greater the number of tube feeds and thus the
greater the number of flow passages. For two finned-tube coils of the same finned width,adifference
in the number of tube feeds or water circuits means that the water flow rate, in gpm (L / s),
number of passes, and pressure drop of the chilled water, in ft WC (Pa), inside the two coils are different.
One pass means that water flows through the coil’s finned length once.
The number of serpentinesများလေလေ၊ the water circuits ၏ the total
cross-sectional area များလေလေဖြစ်ပြီးthe water volume flow rate လည်းများသည်။ (တနည်းရေလည်ပတ်နုန်းများသည်။)
The greater the number of serpentines, the larger the total
cross-sectional area of the water circuits and the greater the water volume flow rate. Figure 15.28
shows five water cooling coils, each specified by the number of serpentines, water circuits, passes,
and rows, all made by the same manufacturer. In Fig. 15.28, serpentine means that at the first
row, there are eight tubes across the finned width, but only four of them are tube feeds that are connected
to the return header. Forafull serpentine coil, all eight tubes in the first row are tube feeds
and connect to the return header.
Dry Coil and Wet Coil
Cooling Coil တစ်ခုသည် Sensible cooling process ကို သာလုပ်ဆောင်နေလျှင် (သို့) လုပ်ဆောင်နေသည့်အခါကို Dry Coil ဟုခေါ်သည်။ တနည်း Dehumiditation Process ကို မပြုလုပ်နေပါ။ထို Coil ၏ မျက်နှာပြင်အပူချိန်သည်(the outer surface temperature of the coil)သည် ဝင်ရောက်လာသည့် လေ၏ ဂျူးပွိုင့် (the dew point of the entering air) ထက်မြင့်နေသည့်အခါမျိုးဖြစ်သည်။ ထို အခြေနေ(Condition)တွင် Condensation မဖြစ်နိုင်ပါ။ ထို sensible cooling process ကို psychrometric chart ပေါ်တွင် ရေပြင်ညီလိုင်း (a horizontal line)ဖြင့် ဖော်ပြသည်။ A sensible cooling process is indicated byahorizontal line toward the saturation curve on the psychrometric chart.
အခန်း (Serving Area) မှ Cooling load အနည်းငယ်သာလိုအပ်သောကြောင့် Chilled Water အနည်းငယ်သာ Coil အတွင်းသို့စီးဝင်သည့် part-load operation သို့ part-load load condition အခိုက် သည် Cooling Coil သသည် Dry Coil အဖြစ် perform လုပ်နေသည်။
Cooling Coil တစ်ခုသည် Sensible cooling and Dehumitification process ကိုလုပ်ဆောင်နေလျှင် (သို့) လုပ်ဆောင်နေသည့်အခါကို Wet Coil ဟုခေါ်သည်။ ထို Coil ၏ မျက်နှာပြင်အပူချိန်သည်(the outer surface temperature of the coil)သည် ဝင်ရောက်လာသည့် လေ၏ ဂျူးပွိုင့် (the dew point of the entering air) ထက်နိမ့်နေသည့်အခါမျိုးဖြစ်သည်။ ထို အခြေနေ(Condition)တွင် လေသည် သူ၌ရှိသော ရေငွေ့ မှုန့်ကလေးများ ကို သယ်ဆက်လက်သယ်ဆောင်နိုင်စွမ်း မရှိတော့ကာ Condensation Process ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ထိုအခါ Cooling Coil သည် Condensate water တို့ဖြင့်စိုစွတ်နေသောကြောင့် Wet Coil ဟုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။